Iyo yekutaurirana-yakavakirwa kupindira yekudzora post-sitiroko kushushikana uye kushushikana - Cognitive Kudzidziswa
Iwe uripano: musha » Articles » Kurohwa » A dialog-based kupindira yekudzora post-sitiroko kuora mwoyo uye kusagadzikana
Kurohwa ndeimwe yezvikonzero zvekufa nekuremara pasi rose muhuwandu hwevanhu vakuru. Nekuti zvinoitika nekukasira, mhedzisiro yazvo pahupenyu hwevanhu uye kugara zvakanaka kwepfungwa kunowanzo kuparadza. Tinogona kutsanangura iyo kugadzikana kwepfungwa senzvimbo yekugutsikana, pfungwa yekuzvimiririra inoratidzirwa nekuzvitambira-wega, pfungwa yekubatsira uye kuvimba mune zvaunokwanisa. Iyi netiweki yemagariro zvinhu, pfungwa uye maitiro zvinosuwisa zvinokanganiswa nezviitiko zvinotevera sitiroko, zvichichinja kuita kushushikana uye kushushikana.
Maererano nekufungidzira, chinenge chikamu chimwe muzvitatu chevanopona sitiroko vanotaura zviratidzo zvinoshungurudza, uye 20% mushumo kushungurudzika kwepashure kwekurohwa. Kuwanda kwekushungurudzwa kwepashure-sitiroko kunoramba kwakakwira, kuchiramba kunyangwe makore mashanu mushure mechiitiko ichi. Matambudziko epfungwa ane hukama hwakakura pahunhu hwehupenyu uye hunoderedza kushanda kwemabasa ekuvandudza.
Munguva yakapfuura zvaifungidzirwa kuti kupindira kwakanangwa kunogona kuvandudza hutano hwepfungwa; zvinosuwisa, humbowo hwacho hwagara hwaratidza zvinopesana Nekudaro, mune chinyorwa chakaburitswa mu2020, Kildal Bragstad nevamwe vake  vakakurudzira a kupindira kwakavakirwa pakutaurirana kusimudzira kugara zvakanaka kwepfungwa.
Chinangwa chaive chekuongorora kushanda kwekurapa pahutano hwepfungwa uye hutano hwezvidzidzo mwedzi gumi nemaviri mushure mekurohwa. Kune chidzidzo vakasarudzwa 322 vakuru vane sitiroko ichangoburwa (Mavhiki e4), akasarudzika akaendeswa kuboka rekuyedza uye rekutonga. Iri boka rekuyedza rakatora chikamu mumasere masere makumi matanhatu kusvika makumi mapfumbamwe zvikamu mumwedzi mitanhatu yekutanga yesitiroko.
Dhata ine chekuita nehupenyu hwepfungwa nehukama hwezvidzidzo zvakabva zvaunganidzwa kuburikidza nemibvunzo (General Hutano Mubvunzo-28, Stroke uye Aphasia Hupenyu hweHupenyu Scale-39g, Sense yeKubatana Scale e Yale Brown imwechete-chinhu chemubvunzo) pamasvondo 4-6, pamwedzi mitanhatu uye pamwedzi gumi nembiri mushure mekurohwa.
Iwe unogona zvakare kufarira: iPad uye post-sitiroko kudzoreredza: ongororo inonakidza
I zvabuda yekutsvagurudza iyi hakuna kuratidza mutsauko muhupenyu hwepfungwa nehukama hwezvidzidzo zviri mumapoka maviri aya pamwedzi gumi nemaviri. Kana zviri zvinoitika pahunhu hwehupenyu, kuvandudzwa kwakawanikwa panguva yekuvhiya iyo, zvisinei, isina kuchengetwa mwedzi gumi nembiri mushure mekurohwa.
Kubva pachidzidzo ichi chekutanga zvinogona kugumiswa kuti, kunyangwe hazvo kumwe kutsvagurudza kuchigona kuitwa munzvimbo ino, hapana mamiriro panguva ino kukurudzira kutaurirana-kwakavakirwa kupindira kudzikisira vakaora mwoyo uye vanoshushikana nyika dzevarwere ve stroke.
 Bragstad LK, Hjelle EG, Zucknick M, et al. Mhedzisiro yekutaurirana-kwakavakirwa kupindira kusimudzira hutano hwepfungwa nehukama mushure mekurohwa. Clin Rehabil. 2020;34(8):1056-1071.
Yedu yemahara yekudyidzana webhu-maappu uye edu aphasia maitiro
aphasia, kufunganya, kugadzikana kwepfungwa, kusuruvara, Kurohwa
A dialog-based kupindira yekudzora post-sitiroko kuora mwoyo uye kusagadzikana2020-09-122020-09-20http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/09/depressione-post-ictus.png200px200px
Izvo zvinokanganisa zvecortical stroke muzera rekukura pane ruzivo rwekuziva uye kudzidza kwechikoroZvinyorwa, Dhibhosi, Risina makomendi